China Magnesium Sulphate orinasa sy mpamatsy | Lemandou
MagnesiumSulphate dia afaka manome otrikaina manankarena ho an'ny voly izay mandray anjara amin'ny fitomboan'ny vokatra ary mampitombo ny vokatra, manampy koa izy io hamaha ny tany sy hanatsara ny kalitaon'ny tany.
Solifara (toy ny S)% ≥ 12,0
Vy (toy ny Fe)% ≤ 0.01
Klôroida (as Cl)% ≤ 0.1
Arsenika (toy ny)% ≤ 0,0002
Fitarihana (toy ny Pb)% ≤ 0,001
25 KG, 50 KG, 1000 KG, kitapo 1250 KG ary kitapo miloko OEM.
Ny fambara tsy fahampian'ny solifara sy manezioma:
1. Mahatonga ho reraka sy ho faty izany raha's tsy ampy.
2.Ny ravina lasa kely kokoa ary ny sisiny ho tonga maina.
Ity karazana zezika ankapobeny ity dia ampiasaina ho zezika basal na zezika fanampiny.
Usage & levitra
1. Magnesium sulfate dia ampiasaina ho zezika fototra
Ny magnesium sulfate dia azo afangaro amin'ny zezika hafa na zezika organika ary apetaka amin'ny tany alohan'ny tanimboly. Amin'ny ankapobeny, ny habetsaky ny magnesium sulfate ampiasaina amin'ny fampiasana fambolena dia manodidina ny 10kg isaky ny mu.
2. Ny magnesium sulfate dia ampiasaina amin'ny topdressing:
Tokony hapetraka aloha ny topdressing magnesium sulfate, ary azo ampiasaina ny furrow na ny famafazana rano. Amin'ny ankapobeny, sulfate magnesium 10-13kg dia mety amin'ny tanin'ny tany tsirairay, ary sulfate manezioma 250-500g dia azo ampiharina amin'ny hazo voankazo tsirairay; aorian'ny fametahana zezika manezioma ampy dia azo ampiharina indray aorian'ny fambolena marobe, ary tsy ilaina ny manisy sulfate magônesia isaky ny vanim-potoana.
3. Magnesium sulfate dia ampiasaina amin'ny famafazana ravina:
Amin'ny ankapobeny, ny firoboroboan'ny fôliara manezioma sulfate dia 0,5% - 1,0% ho an'ny hazo fihinam-boa, 0,2% - 0,5% ho an'ny legioma, 0,3% - 0,8% ho an'ny vary, landihazo ary katsaka, ary ny habetsahan'ny vahaolana zezika manezioma dia manodidina ny 50 -150 kg isaky ny mu.
Previous: Sulphate potasioma
Manaraka: Sulphate amoniaka